(Deg Deg) Beesha Caalamka oo Farmaajo ku cadaadisay in aanu saxiixin xaraashka Shidaalka Somalia. | SMC
Home WARARKA MAANTA (Deg Deg) Beesha Caalamka oo Farmaajo ku cadaadisay in aanu saxiixin xaraashka...
(Deg Deg) Beesha Caalamka oo Farmaajo ku cadaadisay in aanu saxiixin xaraashka Shidaalka Somalia.
Waxaa lagu waday in maanta la xaraasho Shidaalka JFS, kaddib markii aay qaar ka mid ah Hay’adaha Caalamka sida IMF, Bangiga Adduunka aay cadaadis saareen MW Farmaajo & Fahad Yasin.
Dalal dhowr ah oo xalay ku soo biiray cadaadiska ayaa MW Farmaajo u sheegay in aanu saxiixin heshiiska xaraashka JFS, iyadoo aan loo dhameyn lana dhameystirin heshiiska qeybsiga kheyraadka dalka.
Qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ka howlgala Somalia oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in Farmaajo loo sheegay haddii uu ka dhaga adeygo saxiixana heshiiska uu la kulmi doono cawaaqib xumo iyo in uu muteysan in gebi ahaanba aan la aqoonsan doonin Madaxtinimadiisa maadaama aay ka harsan tahay 30 maalmood mudda xileedkiisa.
Waxaa isla galabta shir albaabada u xiran yahay wada galay Fahad Yasin, Qoor Qoor & Laftagareen shirkaas oo ka dhacay xarunta NISA ayaa looga arrinsanayay wixii laga yeeli lahaa tallaabada tan xigta.
Qoor Qoor & Laftagareen ayaa u muujinayay taageero MW Farmaajo iyagoo raja ka qaba in lacagta malaayiinta Doollar ah ee laga helayo xaraashka Shidaalka aay qeyb ka heli doonaan, maadaama aay soo xirantay albaabkaas waxaa Fahad Yasin uu ka cabsi ka qabaa in labada hoggaamiye ee KG & GM aay ka hor yimaadaan ololahiisa dib u doorashada Farmaajo.
Previous articleDhageyso Qaar ka mid ah Dadka ka shaqeeya Kawaanka Hilibka ee Baydhabo Oo Ka Waramay Sida ay noloshooda ugu maareeyaan